On 9/20/2016 (IST)
Ugu horeyn aan isla eegno sawirka hoose oo ah xuduud badeedka ay isku haystaan Kenya iyo Somaliya.
Xuduudka badda ee laysku heysto waa mid seddex geesood ah oo cabirkiisa lagu qiyaasay 100,000 Square Kiilomitir ah,Kenya waxay ku doodeysaa hadii la eego MAABKA dusha in la raaco falaarta toosan ee xuduudka badda iyo sharciyada u yaala oo waqti hore lagu heshiiyay,dhanka Somaliya arintaa gaashaanka ayay ku dhufteen,iyagoo si adag oga hor yimid.
Somaliya waxay ku adkeysatay in xuduud badeedka uu yahay kan Waqooyiga Bari ee xuduudka dhuleedka u dhexeeya Kenya iyo Somaliya,waxaa jiray heshiis dhexmaray labada wadan 2009kii,taasoo ay ku go'aansadeen in qaramada midoobay ay arimahan soo dhexgalaan,iyagoo isla markaa go'aansaday in si is afgarad ah lagu xaliyo.
Armihii wada shaqeynta Kenya iyo Somaliya markii ay shaqeyn kari wayday,Somaliya waxay sanadkii 2014 dacwad ku oogtay Kenya,iyagoo u gudbiyay maxkamada cadaalada aduunka ee loo yaqaan ICJ.
Maxkamada ICJ waxay xalisaa oo keliya hadii labada wadan ee is haysta ay ku heshiin waayaan iyo hadii gobolka ay ka wada tirsan yihiin oo ah barigga Afrika ay wax ka qaban waayaan.
Waxaa muhiim ah in la ogaado go'aanka maxkamada HAGUE in uu yahay mid sharciga waafaqsan ama ah LEGALY BINDING,taasoo micnaheeda uu yahay in Kenya ama Somaliya ay ku guuleysan karaan wixii maxkamada ka soo baxa.
Hadii maxkamada ay u go'aamiso dhanka Somaliya,waxaa gebi ahaan isbedelaya xuduud badeedka Kenya ay la leedahay wadanka Tanzania,taasoo sii abuureysa qala-laaso dhanka wadamada kale ee Mozambique, Madagascar and South Africa,arintan oo ay dadka sharciga yaqaana ay ku tilmaameen HALIS.
Si looga badbaado dagaal badeed dhexmara Kenya iyo Somaliya,waxaa dhici karta in maxkamada aduunka ee ICJ ay gaarto go'aan ah in xuduud badeedka laysla isticmaalo,taasoo Somaliya ay gebi ahaan ka soo horjeeda.
Sharciga baddaha ee Qaramada midoobay ee loo yaqaan UN Convention on the Law of the Sea wuxuu u ogolaanayaa wadan walba uu xaq u leeyahay 200 nautical mile oo ah 370 KM oo badda ilaa beriga wadankaa ah,taasoo loo ogolyahay oo kale in ay u isticmaali karaan EEZ (Exclusive Economic Zone)
Arimaha inta badan aan ka maqalno warbaahinta oo ah in shaqsiyo dowlada Somaliya ka tirsan ay badda u saxiixeen Kenya waa arin runta ka fog,waxaa jira memorandum of understanding oo hadii luqadda Ingiriiska lagu fasiro ah "is a formal agreement between two or more parties. Companies and organizations can use MOUs to establish official partnerships. MOUs are not legally binding but they carry a degree of seriousness and mutual respect, stronger than a gentlemen's agreement." waa qaab heshiis oo ay isla geli karaan Dowlado,shirkado ama laba qof,kaasoo ka turjumaya in ay wada hadleen oo xiriir arimaha la xiriira ay ku heshiiyeen,laakiin wax sharci ah lama kala saxiixan,waxay la mid tahay wax lagu heshiiyay oo aan gacanta lays gelin,saa awgeed ma sharciyeysan.
Arintan ay Kenya iyo Somali ku gaareen isfahanka badda ee 2009 waxaa ka qeyb qaatay Madaxweyne,Wasiiro iyo Safiir,ma ahan oo keliya afarta shaqsi ee hoos ku sawiran,taasoo sanadkii 2014 baarlamaanka Somaliya ay ku gacan sayreen,Kenya wax sharci ah oo aduunka laga aqoonsanahay dhanka badaha ma soo bandhigin.
Iyadoo arimahaa ay jiraan ayaa Kenya waxay shatiga qodista macdanta iyo batroolka ay siisay shirkada ENI ee Talyaaniga,TOTAL oo ah Faransiiska iyo shirkada Mareykanka ah ee ANADARKO,taasoo Somaliya ay aad uga carootay.
Waxaa kale oo xusuus mudan sida aan ku aragno qoraalka hoose,in xeer ilaaliyaha giid ee Kenya Mr Githu Muigai uu isticmaalyo arimaha uu u qoray maxkamada ICJ oo ah in arintan ay dhib u keeni karto la dagaalanka AL-SHABAAAB iyo ciidamada Mareykanka oo xarun badeed ku nol badda laysku haysto oo la yiri waxay la dagaalamaan burcad badeeda.
Somaliya ayaa leh fursad 100/95 ah,laakiin hadii Mareykanka iyo Yurub gacan ku siiyaan Kenya,waxaa laga yaabaa in la yiraahdo wada isticmaala badda oo ah mid idinku filan,taasoo guuldaro u ah wadanka Somaliya.
Ugu dambeyn wixii la sugaa waa go'aanka racfaanka laga qaadan karo ee ICJ uu waqti dheer qaadan kara,laakiin sida ay sheegayaan dadka arimaha maxkamada HAGUE la socda ay sheegayaan in dhamaadka bishan aan ku jirno ee Septemper 2016 ay gaari doonaan go'aan kama dambeys ah.